မိနျးမပကျြ အင်ျဂါရပျ (၂၅)ရပျ – Shwe Thadin
ဇာတျတျောထဲက မိနျးမပကျြ အင်ျဂါရပျ (၂၅)ရပျ ပွညျ့တနျဆာတူတဲ့ မိနျးမဆိုတာ မိနျးမပကျြ အင်ျဂါ ၂၅ ခကျြ (၁) လငျယောကျြား အရပျတဈပါးသှားတာကို ခြီးမှမျးတတျခွငျး။ (၂) အရပျဝေးသှားသော လငျယောကျြားအား အမှတျမရတတျခွငျး။ (၃) လငျပွနျရောကျလာ သညျကို မနှဈသကျခွငျး။
(၄) လငျယောကျြား ဂုဏျကြေးဇူးမဲ့အောငျ ပွောဆိုတတျခွငျး။ (၅) လငျယောကျြားအပျေါ တှငျ ခြီးမှမျးစကား မပွောဆိုတတျခွငျး။ (၆) လငျယောကျြားအပျေါတှငျ အကြိုးမဲ့ကိုသာ ပွုတတျခွငျး။
(၇) လငျယောကျြားအပျေါတှငျ အကြိုးရှိသညျကို မပွုတတျခွငျး။ (၈) လငျယောကျြားအပျေါ တှငျ ပွုလုပျပေးရမညျ့တာဝနျကို မပွုလုပျပေးခွငျး။ (၉) လငျယောကျြားအပျေါတှငျ မပွုလုပျပေးသငျ့တဲ့အမှုမြားသာ ပွုလုပျပေးခွငျး။
(၁၀) အဝတျကို မွဲစှာဝတျ၍ အိပျတတျခွငျး။ (၁၁) လငျကို ကြောပေးအိပျခွငျး။ (၁၂) ကပွောငျးကပွနျ အိပျတတျခွငျး။ (၁၃) အသကျရှု ကွမျးတမျးစှာ အိပျတတျခွငျး။ (၁၄) လငျယောကျြား စိတျဆန်ဒကို ဆနျ့ကငျြ့ဘကျလုပျပွီး စိတျဆငျးရဲအောငျ ပွုလုပျတတျခွငျး။
(၁၅) ကငျြကွီးကငျြငယျစှနျ့ရနျ ခဏခဏ သှားတတျခွငျး။ (၁၆) ဖောကျပွနျသော အကငျြ့ကို ကငျြ့တတျခွငျး။ (၁၇) ကနျြးမာရေးဖောကျပွနျခငျြယောငျ ဆောငျတတျခွငျး။ (၁၈) တခွား ယောကျြားအသံကို နားစှငျ့ပွီး နားထောငျတတျခွငျး။
(၁၉) လငျယောကျြားရှာဖှထေားသော ပစ်စညျးဥစ်စာကို မတရားဖွုနျးတီးပဈတတျခွငျး။(၂၀) တဏှာကာမစိတျနဲ့ အိမျနီးခငျြးယောကျြားမြားကို အကြှမျးဝငျတတျခွငျး။(၂၁) အခြိနျ အခါ မဲ့တှငျ လငျငယျရှာဖှရေနျ လမျးတကာသို့ ဝငျထှကျသှားလာတတျခွငျး။
(၂၂) လငျငယျနပွေီး လငျကွီးပျေါတှငျ ရိုသခွေငျးမရှိဘဲ မကောငျးကွံတတျခွငျး။ (၂၃) အိမျတံခါးဝတှငျ အမွဲလိုလို နထေိုငျတတျခွငျး။ (၂၄) ခန်ဓာကိုယျ အင်ျဂါကွီးငယျတို့ကို ဖျောပွတတျခွငျး။
(၂၅) အရပျတကာ လြှောကျသှားတတျခွငျးတို့ ဖွဈပါပတေယျ။ (မဟာကုဏာလဇာတျ၊ ဇာတကပါဠိတျော၊ ဒုတိယအုပျ၊ စာမကျြနှာ(၁၂၁) အိမျထောငျသညျဘဝတှငျ ယောကျြား မိနျးမ နှဈဦး တို့ မကှဲကှာအောငျ ဘယျလိုပွုမှုနထေိုငျရမလဲလို့ မေးထားတဲ့မေးခှနျးကို မိနျးမသားဘကျက မိနျးမပကျြအင်ျဂါမြားမှ ရှောငျကွဉျနိုငျပွီး ….
ယောကျြားသားဘကျကလညျး မိမိဇနီးမယားကို စောငျ့ကွညျ့ကာ သတိပေးပွငျဆငျပေးနိုငျဖို့ မိနျးမသားမြား ရှောငျကွဉျရမဲ့ အခကျြအလကျတှကေို ရေးပေးလိုကျပါတယျ။ မကွာခငျ ယောကျြားသားမြားရှောငျကွဉျရမဲ့ အခကျြတှလေညျး တငျပေးပါဦးမယျ။
ဒီအခကျြအလကျမြားကို ရေးသားပေးရခွငျးမှာ မိနျးမမြားကလညျးမိမိတို့ ဒီအခကျြတှေ ထဲက တျောတျောမြားမြား ဖွဈနပွေီဆိုရငျ….မိမိကိုယျကို မိနျးမပကျြ မဖွဈအောငျစောငျ့ထိနျး နိုငျဖို့၊ ယောကျြားမြားကလညျး မိမိဇနီးမယားဟာ
မိနျးမပကျြ ဟုတျမဟုတျကို စိစဈတတျပွီး နှဈဦးနှဈဘကျ အကြိုးရှိစလေိုတဲ့ စတေနာနဲ့ ရေး သားပေးလိုကျတာပါ။ မိနျးမသားမြားကလညျး မိနျးမပကျြဘဝမှ လှတျကငျးကွကာ ယောကျြား သားမြားလညျး မိနျးမပကျြမြားနဲ့ ကငျးရှငျးကွပါစလေို့ ဆန်ဒပွုလကျြ….။
ဇာတ်တော်ထဲက မိန်းမပျက် အင်္ဂါရပ် (၂၅)ရပ် ပြည့်တန်ဆာတူတဲ့ မိန်းမဆိုတာ မိန်းမပျက် အင်္ဂါ ၂၅ ချက် (၁) လင်ယောက်ျား အရပ်တစ်ပါးသွားတာကို ချီးမွမ်းတတ်ခြင်း။ (၂) အရပ်ဝေးသွားသော လင်ယောက်ျားအား အမှတ်မရတတ်ခြင်း။ (၃) လင်ပြန်ရောက်လာ သည်ကို မနှစ်သက်ခြင်း။
(၄) လင်ယောက်ျား ဂုဏ်ကျေးဇူးမဲ့အောင် ပြောဆိုတတ်ခြင်း။ (၅) လင်ယောက်ျားအပေါ် တွင် ချီးမွမ်းစကား မပြောဆိုတတ်ခြင်း။ (၆) လင်ယောက်ျားအပေါ်တွင် အကျိုးမဲ့ကိုသာ ပြုတတ်ခြင်း။
(၇) လင်ယောက်ျားအပေါ်တွင် အကျိုးရှိသည်ကို မပြုတတ်ခြင်း။ (၈) လင်ယောက်ျားအပေါ် တွင် ပြုလုပ်ပေးရမည့်တာဝန်ကို မပြုလုပ်ပေးခြင်း။ (၉) လင်ယောက်ျားအပေါ်တွင် မပြုလုပ်ပေးသင့်တဲ့အမှုများသာ ပြုလုပ်ပေးခြင်း။
(၁၀) အဝတ်ကို မြဲစွာဝတ်၍ အိပ်တတ်ခြင်း။ (၁၁) လင်ကို ကျောပေးအိပ်ခြင်း။ (၁၂) ကပြောင်းကပြန် အိပ်တတ်ခြင်း။ (၁၃) အသက်ရှု ကြမ်းတမ်းစွာ အိပ်တတ်ခြင်း။ (၁၄) လင်ယောက်ျား စိတ်ဆန္ဒကို ဆန့်ကျင့်ဘက်လုပ်ပြီး စိတ်ဆင်းရဲအောင် ပြုလုပ်တတ်ခြင်း။
(၁၅) ကျင်ကြီးကျင်ငယ်စွန့်ရန် ခဏခဏ သွားတတ်ခြင်း။ (၁၆) ဖောက်ပြန်သော အကျင့်ကို ကျင့်တတ်ခြင်း။ (၁၇) ကျန်းမာရေးဖောက်ပြန်ချင်ယောင် ဆောင်တတ်ခြင်း။ (၁၈) တခြား ယောက်ျားအသံကို နားစွင့်ပြီး နားထောင်တတ်ခြင်း။
(၁၉) လင်ယောက်ျားရှာဖွေထားသော ပစ္စည်းဥစ္စာကို မတရားဖြုန်းတီးပစ်တတ်ခြင်း။(၂၀) တဏှာကာမစိတ်နဲ့ အိမ်နီးချင်းယောက်ျားများကို အကျွမ်းဝင်တတ်ခြင်း။(၂၁) အချိန် အခါ မဲ့တွင် လင်ငယ်ရှာဖွေရန် လမ်းတကာသို့ ဝင်ထွက်သွားလာတတ်ခြင်း။
(၂၂) လင်ငယ်နေပြီး လင်ကြီးပေါ်တွင် ရိုသေခြင်းမရှိဘဲ မကောင်းကြံတတ်ခြင်း။ (၂၃) အိမ်တံခါးဝတွင် အမြဲလိုလို နေထိုင်တတ်ခြင်း။ (၂၄) ခန္ဓာကိုယ် အင်္ဂါကြီးငယ်တို့ကို ဖော်ပြတတ်ခြင်း။
(၂၅) အရပ်တကာ လျှောက်သွားတတ်ခြင်းတို့ ဖြစ်ပါပေတယ်။ (မဟာကုဏာလဇာတ်၊ ဇာတကပါဠိတော်၊ ဒုတိယအုပ်၊ စာမျက်နှာ(၁၂၁) အိမ်ထောင်သည်ဘဝတွင် ယောက်ျား မိန်းမ နှစ်ဦး တို့ မကွဲကွာအောင် ဘယ်လိုပြုမှုနေထိုင်ရမလဲလို့ မေးထားတဲ့မေးခွန်းကို မိန်းမသားဘက်က မိန်းမပျက်အင်္ဂါများမှ ရှောင်ကြဉ်နိုင်ပြီး ….
ယောက်ျားသားဘက်ကလည်း မိမိဇနီးမယားကို စောင့်ကြည့်ကာ သတိပေးပြင်ဆင်ပေးနိုင်ဖို့ မိန်းမသားများ ရှောင်ကြဉ်ရမဲ့ အချက်အလက်တွေကို ရေးပေးလိုက်ပါတယ်။ မကြာခင် ယောက်ျားသားများရှောင်ကြဉ်ရမဲ့ အချက်တွေလည်း တင်ပေးပါဦးမယ်။
ဒီအချက်အလက်များကို ရေးသားပေးရခြင်းမှာ မိန်းမများကလည်းမိမိတို့ ဒီအချက်တွေ ထဲက တော်တော်များများ ဖြစ်နေပြီဆိုရင်….မိမိကိုယ်ကို မိန်းမပျက် မဖြစ်အောင်စောင့်ထိန်း နိုင်ဖို့၊ ယောက်ျားများကလည်း မိမိဇနီးမယားဟာ
မိန်းမပျက် ဟုတ်မဟုတ်ကို စိစစ်တတ်ပြီး နှစ်ဦးနှစ်ဘက် အကျိုးရှိစေလိုတဲ့ စေတနာနဲ့ ရေး သားပေးလိုက်တာပါ။ မိန်းမသားများကလည်း မိန်းမပျက်ဘဝမှ လွတ်ကင်းကြကာ ယောက်ျား သားများလည်း မိန်းမပျက်များနဲ့ ကင်းရှင်းကြပါစေလို့ ဆန္ဒပြုလျက်….။